Xukuumadda oo ka hadashay Wadahadallada Somalia, Jidka Berbera iyo Wajaale iyo Dhoofka xoolaha | Berberanews.com
Home WARARKA Xukuumadda oo ka hadashay Wadahadallada Somalia, Jidka Berbera iyo Wajaale iyo Dhoofka...
Xukuumadda oo ka hadashay Wadahadallada Somalia, Jidka Berbera iyo Wajaale iyo Dhoofka xoolaha
Hargeysa(Berberanews)-Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inkastoo aanay rajo buuran ku qabin midho ka soo baxa wada hadalada Somaliland iyo Somaliya, haddana ay madaxweynaha Somaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ka rajaynayso inuu si dhab ah u galo wada hadalada.
Isagoo wasiir Sacad ka jawaabaya su’aal nuxurkeedu ahaa sababta ay dawladdu Sucuudigu u xayirtay xoolaha Somaliland, wuxuu yidhi “Sida ay sheegtay wasaaradda Beeraha Sucuudigu, waxay yidhaahdeen laba neef ayaanu ka helnay xanuun. Laakiin labadan neef kamay tagin Somaliland, waxayse ka tageen Soomaaliya. Nasib darro, waxa lanoo ciqaabayaa waxa aanu u aragno inaanaan u qalmin. Xoolahayagu way caafimaad qabaan, waxaanu leenahay maxjaro caalami ah, waxaanan rajaynaynaa in xayiraadaas la qaadi doono. Xoolaha nooli waa waxa ugu weyn ee aanu dhoofino, markaas inaanu weynaa dhaqaalahayaga waxay ku tahay dhibaato weyn.
Previous articleIs-rasaasayn dhexmartay Ciidammada Somaliland iyo Puntland
Next articleHantidhawre mise Hantiboobe!